စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းတရားနှင့်ပြည့်ဝသော အသက်တာ | Calvary Burmese Church
January 19, 2017 February 2, 2017 / Peter Lwin
သင်၏အသက်တာ ထာဝရပြောင်းလဲခြင်း ရရှိလိုပါသလား…သင်၏ဘ၀ကို စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းတရားဖြင့် တန်ဆာဆင်ပါ။ မည်သည့် အရာကမျှ မပြောင်းလဲစေနိုင်သော အရာများကိုပင် ပြောင်းလဲစေနိုင်သော အရာမှာ ချစ်ခြင်းတရားပင်ဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းတရားသည် ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေသော အရာခပ်သိမ်းကို လန်းဆန်းသစ်လွင်သော အရာများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်သည် ချစ်ခြင်းတရားဖြစ်သောကြောင့် စကြာဝဠတခွင်လုံး၏ အကြီးမားဆုံးသော အရာသည် ချစ်ခြင်းတရားဖြစ်သည် ဟုဆိုလျှင်လွန်အံ့မထင်။ နှုတ်ကပတ်တော်က ဘုရားသခင်၌ ချစ်ခြင်းတရားရှိသည် ဟု မဆိုမဖော်ပြပါ၊ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းတရားဖြစ်သည် (God is Love) ဟုဆိုသည်။ ချစ်ခြင်းတရားသည် မည်သည့် အရာကမျှ အနာပျောက်ကင်းစေခြင်းငှါမတတ်နိုင်သော ဝေဒနာ များကိုလည်း အနာပျောက်စေနိုင်သည်။ ချစ်ခြင်းတရားသည် အားနည်းဆုတ်ယုတ်သူကိုလည်း အင်သစ်အားသစ် ပေးနိုင်သည်။ ပြန်လည်လန်းဆန်းစေနိုင်သည်၊ တန်ခိုးအစွမ်းများကိုလည်းပေးနိုင်သည်။
မြန်မာကျမ်းစာအုပ်တွင် “မေတ္တာစိတ်သည် လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့် ကင်းစေလော့” ဟုဆိုသည် အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာ၌ “Don’t just pretend to love others” အခြားသူများကို ဟန်ဆောင်အချစ်များဖြင့်ချစ်မပြပါနှင့် ဟုဆိုသည်။ ဟန်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းဖြင့် ချစ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတပါးကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထက် သာ၍ ချီးမြှောက်ကြလော့ဆိုသည့် အပိုဒ်သည် အလွန်လေးနက်သိမ်မွေ့ပြီး နှစ်လိုဘွယ် ကောင်းလှသည်။
သူတပါးကို ကိုယ့်ထက်သာ၍ ချီးမြှောက်ရမည် ဆိုသည့် အချက်၏ ဆိုလိုရင်း ကိုစာဖတ်သူ နားလည်သဘောပေါက် မည်ဟု ထင်ပါသည်။ မိမိ၏ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ဆွေမျိုး၊ အသင်းတော် နှင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း များတွင် တစုံတ ယောက်သည် ကျန်းမာရေးအရဖြစ်စေ၊ ငွေရေးကြေးရေးအရဖြစ်စေ၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် တခုခုအတွက် ကျော်လွှားနိုင်သူ အောင်မြင်သူ ရှိလျှင် ထိုသူနှင့် အတူ အောင်ပွဲခံရန် ချီးမြောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကိုယ် အလေးချိန် ၂ ပေါင်ကျသွားသော အ၀လွန်မိတ်ဆွေ ကိုခနဲ့မည့်အစား သူ နှင့် အတူ ၀မ်းမြောက်ပါ၊ အိမ်ထောင်ကျသော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း စုံတွဲများကို ဂုဏ်ပြုပါ၊ အကြွေးနွံထဲမှ လွတ်မြောက်သော သူ မိမိအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ရှိလျှင်လည်း သူနှင့် အတူ ၀မ်းမြောက်လျှက် အားပေးပါ။ ကျမ်းစာ က အချင်းချင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထက် ပို၍ ချီးမြှောက်ရန် သွန်သင် တိုက်တွန်းထားသည်။
ဘုရားသခင်၏ အံ့သြဘွယ် ကောင်းသော နိယာမ တခုမှာ – ဘုရားသခင်သည် လောကစကြ၀ဠာ တခွင်လုံးရှိ အရာအားလုံး တခုကိုတခု ချိပ်ဆက် ထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ စကြ၀ဠာ တခွင်လုံးတွင် ဖြစ်ပျက် နေသော အမှု အားလုံးတို့ သည်ချိပ်ဆက်နေသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သူတပါး တယောက်ယောက်ကို အကူအညီ တခု ပေးလိုက်လျှင် ထိုအမှုသည် သူ့ ဟာနှင့် သူ မည်သူမျှ မသိလိုက်ဘဲ၊ လေထဲတွင် အလိုလို၊ အလဟသေ၀၀ါးပျောက်ကွယ် သွားမည်မဟုတ်ပါ။ သင်ပေးလိုက်သော အကူအညီ၏ အချိပ်အဆက်ဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သင်၏ အခက်အခဲ ပြဿနာ များကို ကူညီဖြေရှင်း ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် မည်သည့်အခါတွင်မျှ သင့်ကိုယ်သင် ကူညီပါသလား ဟု မေးမြန်းမည် မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် သင်သည် အခြားသူများကို အကူ အညီ ပေးပါသလား ဟု မေးမြန်းနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ အခြား သူ တယောက်ယောက်၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် အတွက် ပံ့ပိုးလို စိတ် သင့်တွင် ရှိဘူးပါသလား၊ ရှိခဲ့လျှင် ချက်ချင်း တတ်နိုင်သည့် အကူအညီ များကို ပေးလိုက်ပါ၊ ဘရိတ်အုပ် မထားပါ နှင့်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပေးဆပ်လိုက်ပါ၊ ပေးဆပ်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှာ လွတ်ငြိမ်းခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း နှင့် ဘုရားသခင် ထံမှ လာသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ များစွာရှိပါသည်။
ယောဘ ၀ထ္ထုကို ကြည့်ပါ၊ သူသည် ပိုင်ဆိုင်သမျှ အားလုံး အပြင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် မိသားစုဝင် များကိုပင် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ယောဘ၀ထ္ထု ၏ အဆုံးပိုင်းတွင် ဘုရားသခင် က သူ ဆုံးရှုံးခဲ့သမျှ ပြန်ပေးသည့် အပြင် သာ၍ များသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ များကို ပြန်ပေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း? ယောဘ သူ့ကိုယ်သူ အတွက် ဆုတောင်းခဲ့ပါ သလား? မဟုတ်ပါ… “ယောဘသည် အဆွေခင်ပွန်းတို့အဘို့ ဆုတောင်းပြီးမှ သူခံရသော ဒုက္ခအကြောင်းကို ထာဝရဘုရားသည် ပယ်ရှင်း ၍ အရင်ထက် နှစ်ဆသော ဥစ္စာကို ပေးတော်မူ၏၊၊ After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before” ယောဘ၀ထ္ထု ၄၂း၁၀)
မိတ်ဆွေ…. အခြားသူ များအတွက် ဘယ်လောက် ပေးဆပ်ခဲ့ဘူးပါသလဲ၊ ပေးဆပ်ကြည့်ပါ မိတ်ဆွေ၊ မိမိရဲ့ လိုအင်တွေအတွက်ဘဲ ဆုတောင်းခဲ့ပါသလား… အခြားသူတွေအတွက် ဆုတောင်းကြည့်ပါမိတ်ဆွေ… လူတွေအတွက် ပေးဆပ်ပြီး မိမိရဲ့ ဘ၀မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေပါ။
၀န်ခံချက်။ Rick Warren ၏ Fill Your Life With Love ကို ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုထားပါသည်
Articles Christian Life, Christian Life
← ဘုရားသင့်ကို ရှာသောအခါ When God Searching You
Christ’s Mindset →